Siyaasiinta Iswiidhan oo doonaya in la joojiyo saacada sanadkii labbo jeer la badallo | Somaliska
Siyaasiinta Iswiidhan oo doonaya in la joojiyo saacada sanadkii labbo jeer la badallo
Iyadoo maalinta axadda ah dib loo celinayo saacada, ayaa hadana waxa jira siyaasiin cabasho ka muujiyey saacadda sanadkiiba labo jeer la badalo (vinter tid iyo somar tid). Siyaasiintan ayaa tilmaamay in isbadalka saacada ay dadka jaha wareer ku riday.
Sanadkan ayaa xisbiyadu dalku waxeey shan mooshin ka keeneen in isbadal lugu sameeyo saacada oo loo daayo sida hadda tahay. Stefan Nilsson oo xisbiga Deegaanka katirsan una qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa aaminsan in horey iyo gadaal u dhigista saacada ay dadku ku daaleen.
Wuxuu sidoo kale aaminsan yahay in haddii saacada sida ay iminka tahay (somar tid-ka) ay carruuraha la il daran cayilka ka saacideeyso siddii miisaankoodu hoos ugu dhici lahaa, taas oo macnaheedu tahay in dha dhaqaaqa carruuraha u badnaayo. Iswiidhan tan iyo sanadkii 1980-kii ayaa waxaa saacadu aheyd mid ku shaqeeysa xilliga xagaaga ee somar tid-ka. Ujeedkuna wuxuu ahaa in laga faa’iideysto tamar qoraxda, hase ahaatee muddo aad u dheer Iswiidhan iyo dalal kale oo ku yaala Galbedka ayaa doodrtay in saacadda labbo jeer la badallo, sababtuna waa iyaga oo sheegay in xilliga xagaaga laga faa’iideysanayo qoroxda, balse iminka waxaa muuqata in xisbiyadu doonayaan in xilliga xagaaga uu noqdo kan keliya ee markale dalka laga hirgeliyo. Nilsson waxaa kale oo ku doodaya in xitaa saacad dabiici ah oo dulku yeesho ay yareeyn laheyd shilalka ay baaburtu sababtaan isbadalka xilliyada wageed.
Ugu damebeyntii doodan oo Nilsson tan iyo sanadkii 2008-dii waday ayaa haatan waxaa muuqata in xisbiyadu daneynayaan in laga munaaqishoodo. Inkastoo aan la ogeyn in dhamaan xisbiyada oo dhami doonayaan isbadal joogto ah oo saacada lugu sameeyo, haddana haddi ay dhacdo in Iswiidhan u doorato xilliga xagaaga saacadda saxda ee dalku yeesho iyadoo aan sanadkii labbo jeer la badalin ay imaaneyso isku dhac xilli oo u dhaxeeya Iswiidhan iyo Yurubta kale ee iyagana sanadkii saacadaha labbo waqti badala.